Fivavahan-drazana malagasy - fomba malagasy Info. Abo
★ Fivavahan-drazana malagasy - fomba malagasy ..
Ny fivavahan-drazana na fivavaham-poko dia fivavahana na finoana anny foko na vondrom-poko na firenena iray manokana. Avahana aminny fivavahana manana fikendrena anjiaby, toy ny kristianisma sy ny finoana silamo, ny fivavahan-drazana.
Ranavalona I dia mpanjakavavy malagasy izay nanjaka tao aminny Fanjakani Madagasikara nanomboka taminny taona 1828 hatraminny taona 1861, izay mpanidrahindra tanindrazana sady nanohitra ny fitsabahanny Eoropeana aminny raharaham-panjakany no nanandratra avo dia avo ny fanompoan-tsampy sy nanenjika fatratra ny fivavahana kristiana. Taminny taona 1828, tamin ny nahafatesan-dRadama I vadiny sady zanak Andrianampoinimerina, dia izy no niakatra teo aminny fitondranana taminny 4 Aogositra 1829 ka niova anarana hoe Ranavalona na Ranavalomanjaka fa tsy natao hoe Ramavo na Mavo na Rabodonandrianamp ...
Ny Antefasy na Antaifasy na Tefasy dia vondrom-poko iray ao Madagasikara ao amin ny morontsiraka atsimo-atsinanana, ao amin ny faritra manodidina an i Farafangana. Izany anarana izany dia midika hoe "ireo izay monina eo amin ny fasika". Eo anelanelan i Manampatra sy Mananara Atsimo izy ireo, izany hoe eo anelanelan ny Antemoro ao avaratra sy ny Antesaka ao atsimo. Niisa 150 000 any ho any ny Antefasy tamin ny taona 2013.
Ny Zafisoro dia foko malagasy monina any amin ny morontsiraka atsimo-atsinanan i Madagasikara, ka ao amin ny distrikan i Farafangana no ahitana azy ireo betsaka. Heverina ho zana-pokon ny Antefasy ny Zafisoro sady mitovy faritra onenana amin ny Antefasy. Maro ireo etnôlôga no mihevitra fa ny Antefasy sy ny Zafisoro koa, dia zana-pokon ny Antesaka. Eo amin ny 91 000 ny isan ny Zafisoro.
★ Fivavahan-drazana malagasy
Ny fivavahan-drazana malagasy na ny finoan-drazana malagasy dia ny fivavahana sy ny finoana narahin ny Ntaolo malagasy, izay mifototra indrindra amin ny fivavahana amin ny Zanahary sy ny fanahin ireo razana efa maty. Miovaova isam-paritra ny endriky ny fivavahan-drazana malagasy noho ny fisian ny singa hafa manampy ireo efa voatanisa etsy aloha ireo.
Ireto avy ny zavatra inoan ny Malagasy mandala ny fivavahan-razana ho manana ny hasiny: ny sampy, ny ody, ny hazomanga, ny vatolahy, ny karazan-kazo sasany, ny karazam-biby sasany toy ny omby. Ireto ny zavatra tsy hita maso nefa inoany fisiana: ny Zanahary, ny fanahin ny razana, ny kalanoro, ny tromba, ny avelo, ny matoatoa. Mba ho fanajana an ireo fanahy ireo dia manatanteraka fanatitra sy sorona, ny Ntaolo malagasy. Ho fanajana ireo havany efa maty dia manao famadihan-drazana na manao asa lolo ny Malagasy.
Ny misahana ny fandraharahana ny fifandraisana amin ireo fanahy tsy hita maso ireo dia ny mpisorona, ny mpitan-kazomanga ary ny ombiasa. Inoan ny Ntaolo malagasy ho manana hery miafina manimba ny mpamosavy. Manatona mpanandro koa ny Malagasy, izay mino ny fisian ny atao hoe vintana, raha hanao zavatra mba hahaizany ny fotoana mety anatanterahany ny zavatra kasainy hatao sy ny fombafomba tokony hatao, ka mety misy ny ala faditra. Manatona mpisikidy koa ny Ntaolo malagasy raha te hahafantatra ny marina ny amin ny zava-mitranga eo amin ny fiainany.
1. Ny olombelona
Tsy mahavita tena ny olombelona
Mila ny fitahiana sy ny fiarovanny fanahy hafa ankoatra ani Zanahary izay lavitra loatra ny Ntaolo malagasy, ka ny voalohany aminireo dia ny fanahnny razana.
Ny avelo dia karazana fanahy ambanimbany tsy dia maharitra ela Ioatra aorian ny fahafatesana, izay azo heverina ho fototry ny hery mahavelona fotsiny ny olombelona na ny biby.
1.1. Ny olombelona Tokana ny razambe voalohany nipoirany olombelona
Na dia fantatry ny Ntaolo malagasy fa samy manana ny fihodirany sy ny fiteniny sy ny fombany ny olombelona, dia hita taratra eo aminny fedrà sy ny oha-pitenenanny Ntaolo ny fiheverana ny olombelona rehetra ho nipoitra taminny razambe tokana. Hoy ny ohabolanizy ireo manao hoe: "Ladim-boatavo ny olombelona ka raha fotorana dia iray ihany".
1.2. Ny olombelona Tsy mahavita tena ny olombelona
1.3. Ny olombelona Samy manana ny anjarany ny olombelona
Samy manana ny anjarany avy amini Zanahary ny olona na ny vondronolona tsirairay. Ny anjara dia zavatra soa na ratsy inoana ho avy amin Andriamanitra. Ny anjara dia ilazana ny zavatra tsy azo ihodivirana sady lehibe toy ny loza, ny fahafatesana, sns. Mifandray ihany ny anjara sy ny vintana sy ny lahatra, ka izany no ahenoana ny hoe "anjara vintana".
Tsy mandidy alohanAndriamanitra aho, fa izay zara-vintana lolohavina.
Tsy misy nivavaka niankandrefana, fa samy nianavaratra ihany, fa ny harena mila vintana, ka raha tsy anjara, tsy tonga.
Anjaranny mpanan-karena ny milamin-tokantrano, fa tsy mba anay malahelo.
1.4. Ny olombelona Ny fanahy
Ny fanahy, aminny Ntaolo, dia zavatra ao aminny olombelona, tsy hita maso, izay miantoka ny fahatsiarovan-tenany sy ny fananany fahendrena. Ny teny hoe fanahy dia ampiasaina aminny fiteny malagasy ankehitriny hilazana zavatra manan-tsitrapo nefa tsy mety hitanny olombelona.
1.5. Ny olombelona Ny avelo
1.6. Ny olombelona Ny ambiroa
Ny ambiroa dia singa ara-panahy izay inoanny Ntaolo fa maharitra aorian ny fahafatesana. Mety hialanny ambiroany vetivety ny olona iray ka hanjary ho verivery hevitra na verivery tadidy. Miverina ao aminny olombelona ihany ny ambiroa rehefa avy niala tao. Ny tsy fiverenanny ambiroa dia miteraka fahafatesana. Azo atao araka izany ny manala ambiroa na mampody ambiroa ny olona iray.
1.7. Ny olombelona Manana fanahy afaka ny hiaina aorianny fahafatesanny vatana
Inoanny Ntaolo malagasy fa tsy maty miaraka aminny vatana ny fanahinny olombelona fa lasa fanahy afaka manohy ny fisiany ivelanny tontolonny velona. Mety miseho ao aminny tontolonny velona ny fanahinny razana, ka izany no mampisy ny tromba sy ny angatra sady itandremana ny zavatra nameperany.
2. I Zanahary sy ny zanahary
Andriamanitra na Zanahary, aminny Ntaolo malagasy dia fanahy tsy misy toa azy, izay ninoany fa nahary izao rehetra misy izao, ka isanizany ny olombelona. Maro koa ireo zavatra ataonny Ntaolo malagasy hoe zanahary na andriamanitra.
2.1. I Zanahary sy ny zanahary Mpahary i Zanahary
I Zanahary dia andriamanitra monina any an-danitra ao aminny fedrà malagasy. Heverina ho andriamanitra mpahary. Rehefa maty ny olombelona dia miakatra any an-danitra, any amini Zanahary, ny fanahiny.
2.2. I Zanahary sy ny zanahary Mandahatra aminny zava-drehetra i Zanahary
Ninoanny Ntaolo malagasy fa i Zanahary no mandahatra sy mandidy ny zavatra rehetra. Ny lahatra dia "fitondran Andriamanitra na ny vintana mihatra amin ny olombelona". Izao ny filazanny Ntaolo malagasy momba ny lahatra:
2.3. I Zanahary sy ny zanahary Ny fivavahana amini Zanahary sy ny fatahoranny Ntaolo azy
Andriamanitra lavitra ny olombelona i Zanahary ka atahorany, tsy antsoiny raha tsy aminny antony manokana, na raha tsy matahotra na tsy manana razana iraisana aminy ny olona mifaninona aminny tena. Hita taratra aminny ohabolana sy ny fomba fiteny malagasy izany finoanny Ntaolo ani Zanahary izany. Matetika dia tsy maintsy ampiarahina aminny fitokavana ny razana ny fiantsoana ani Zanahary, azo antsoina tsy misy fanononana ani Zanahary anefa ny razana.
3. Ny razana
Ny razana dia ireo olona efa maty nefa heverina ho hery mpanao soa eo aminny fiainanny velona, izay heverina fa afaka mitahy sy miaro ny olona mbola velona izay ankasitrahany na manasazy izay olona tsy ankasitrahany. Miovaova arakaraka ny faritra eto Madagasikara ny finoana ny hery sy ny asanny razana.
3.1. Ny razana Ny fasana
Ny fasana dia ilay zavatra naorina mba hiarovana ny toerana nandevenana na nanafenana ny maty. Io no toerana hita maso izay sady mampahatsiahy ny fahafatesana no mampifandray ny tontolonny velona sy ny tontololnny maty koa. Ao no itoeranny razana aminny androny sisa rehetra.
3.2. Ny razana Ny hazomanga
Ny hazomanga dia tsato-kazo roa na telo mifanakaiky, atsatoka aminny toerana iray, izay atao hanatanterahana fianianana na sorona na fitsofan-drano. Ny mpitan-kazomanga izay atao hoe mpisorona koa no miandraikitra ny fikarakarana ny zavatra atao eo aminny hazomanga. Famantarana ny maha iray firazanana na iray fianakaviana ny hazomanga.
3.3. Ny razana Ny aloalo
Ny aloalo dia zavakanto vita aminny hazo misy sary vaosokitra maneho ny sombin-tantaram-pianinana, na ny zavatra tianilay olona maty fony fahavelony, na ny fananan-karenanny maty fananana omby indindraindrindra, na ny toerany teo aminny fiarahamonina. Eny aminny fasana no ametrahana ny aloalo any aminny faritra Mahafaly sy aminny faritra Androy. Ankehitriny dia ataonny olona haingon-trano na haingon-jaridaina ny aloalo.
3.4. Ny razana Ny tsangambato
Ny tsangambato dia vato aorina ho solom-pasanny olona tsy hita faty, maty taminny ady na taminny antony hafa. Misy koa ny miantso azy io hoe orimbato na vatolahy. Arakaraka ny faritra eto Madagasikara dia mety tsy hitovy hevitra ireo teny telo ireo. Ny tsangambato koa dia enti-manamarika ny zava-nitranga lehibe teo aminny tantaranny fanjakà-mpanjaka na ny foko iray.
3.5. Ny razana Ny fivavahana aminny razana
Ny fivavahana aminny razana dia fivavahana aminny fanahinny maty. Manam-pifandraisana hentitra aminny fahafantarana ny tetiaranny taranaka tany aloha ny fivavahana aminny razana.
3.6. Ny razana Ny fanajana ny fady
Ny fady dia ireo zavatra raràna tsy azo tanterahina araka ny fepetra napetraky ny fomba amam-panao. Araka ny finoana dia vokatry ny hery tsy hita maso sady mifandray amin’ny fivavahana aminny razana ny fady. Izay manota fady dia heverina ho maloto sy manohintohina ny filaminana ara-panahinny fiarahamonina.
Aseho aminny alalanny fanajana ny fady koa ny fivavahana aminny razana izay hajaina mandritra na aorianny andro nahavelomany. Inoana fa ny fanehoam-panajana ny razana aminny alalanny fanajana ny fady dia mahatonga ny razana hitahy ny velona.
3.7. Ny razana Ny fanaovana sorona
Ny sorona dia fomba tanterahina hanomezana haja na ho enti-mifona na mangata-pitahiana aminny Zanahary na ny razana, ka matetika famonoana biby toy ny omby no atao. Ny mpisorona na ny mpitan-kazomanga no mitarika izany fomba izany izay atrehinny sokajinolona voakasika na ny olona rehetra arakaraka ny zavatra mitranga.
Ny famonoana omby atao sorona no fomba anehoana ny fanajana ny razana na ampitsaharana ny fahatezeranizy ireo. Azo atao koa ny maneho fanajana ny razana aminny alalanny fanidinana toaka avy aminny tavoahangy vao nosokafana aminny zoro avaratra-atsinananny trano mba hanomezana ny anjarany.
3.8. Ny razana Ny fanaovana famadihana
Tsapa aminny alalanny fomba fanaovana fasana ny fivavahana aminny razana, ka any afovoan-tany dia manatanteraka ny famadihana. Ahatsiarovana ireo razana sy ivorianny fianakaviana sy ny mpiara-monina ny famadihana ary anaovana lanonana.
3.9. Ny razana Ny fankalazana ny fitampoha
Ny fitampoha dia fampandroana ireo sisan-javatra avy aminny vatanny mpanjaka efa maty, izay tanterahina Malagasy sakalava any aminny faritra Menabe, isaky ny dimy taona mandritra ny fito andro, mba hahatsiarovana ireo mpanjaka sakalava.
3.10. Ny razana Ny fisehoanny razana aminny alalanny nofy
Rehefa te hiresaka aminny velona ny razana dia matetika miseho aminny nofy, ka aminizany no ilazany ny hafatra tsy voalazany fahavelony, aminizany koa no anambaràny ny zavatra tiany hatao aminy na tsy tiany hatao aminy, aminizany no ilazany ny tokony hatao aminny fananana na taranaka navelany.
3.11. Ny razana Ny tsindrimandry
Ny tsindrimandry dia ny fampidirana hevitra ataonny razana ao an-tsainny olona hahalalany ny tokony hatao na ny tokony hambara aminny velona. Tsy miseho ny fanahinny razana mandritra izany fa ny eritreritrilay olona voatsindrimandry no mahatsapa zavatra. Ninoanny Ntaolo fa afaka manindry mandry koa i Zanahary na ny zanahary
3.12. Ny razana Ny fanatrehanny razana aminny alalanny tromba
Ny tromba dia fanahinireo mpanjaka tany aloha izay mbola manohy ny fanapahany aminny velona aminny alalanny findramany ny tenanny olona iray mbola velona. Miteny aminny alalanio olona misy tromba io ny fanahinny mpanjaka. Any aminny faritra sakalava no tena ahitana izany nefa miely eranny Nosy ihany koa izany finoana izany. Aminny alalanny antsa amanamponga sy angorodao izay atao handihizanilay olona misy tromba sady hitokavana ilay fanahy mba hiditra ao aminy.
3.13. Ny razana Ny fisehoanny angatra
Ny angatra na matoatoa dia fisehoanny fanahinny olona maty aminny velona, indrindra ny fanahinny razana tsy nisy mpikarakara na tsy mankasitraka ny fomba fandraisanny velona azy. Tsy tianny Malagasy ny mahita na mifanena aminangatra. Ny fisianny angatra dia mety ho tsapa aminny fahatsiarovana hatsiaka hafahafa na fitambesaranny vatana na ny entana tampoka na aminny fahitana afo izay atao hoe "afonangatra" na "afon-dolo". Mety hampijaly ny olona matory ny angatra aminny alalanny fanindriany azy sy ny fampitahorany azy. Misy ny olona izay inoana fa mahay mamoha angatra hiresaka aminny havany.
3.14. Ny razana Ny fambara
Inoanny Ntaolo malagasy koa ny fisianny fambara izay tsy inona fa zava-mitranga tsapanny olona hita maso na renny sofina sns ka manampy azy hahalala mialoha ny zavatra hitranga aminny hoavy akaiky na lavitra. Mety ho zava-tsoa no hitranga nefa matetika dia zava-dratsy no ahenoana ny teny hoe fambara, toy ny hoe fambara loza. Tsy voatery ho ny razana ihany no mandefa fambara fa mety ho i Zanahary na ny fanahy hafa rehetra. Tsy zava-dehibe anefa ny fahalalana ilay fanahy nandefa ny fambara.
4. Ireo zavatra sy fanahy hafa inoanny Ntaolo malagasy fa misy
Ankoatra ani Zanahary sy ny razana dia maro ireo fanahy tsy hita maso inoanny Ntaolo fisiana.
Ny tromba dia ny fanahin ny razana indrindra ny an ireo mpanjaka taloha sy ny fipetrahan izy ireo ao amin ny olona iray mbola velona izay lazaina fa misy tromba.
4.1. Ireo zavatra sy fanahy hafa inoanny Ntaolo malagasy fa misy Ny fanahim-bazimba
Ny Vazimba dia lazainny lovantsofina fa olona fohy nonina tany afovoanny Nosy sady nivavahanny olona ny fasany taty aoriana. Misy anefa ireo milaza fa olona tahaka ny Malagasy ankehitriny ihany ny Vazimba ka soratana hoe Vazimba. Atao hoe vazimba ihany koa ny fanahiny sy ny fasany. Aminny maha olombelona ny Vazimba dia inoanny Ntaolo ny fitohizanny fahavelomanny fanahiny, ka izany no antony anajana ny fasany.
Miteny irery toy ny miresaka amim-Bazimba.
Misakaiza amim-Bazimba malahelo, ka ny akoholahy lany, ny fitahiana tsy misy.
4.2. Ireo zavatra sy fanahy hafa inoanny Ntaolo malagasy fa misy Ny kalanoro
4.3. Ireo zavatra sy fanahy hafa inoanny Ntaolo malagasy fa misy Ny kokolampo
Ny kokolampo na koko dia zavamananaina mitovitovy aminny olona, karazanny kalanoro. Mety ho tsara fanahy na ho ratsy fanahy ny kokolampo. Tsy hita maso ny kokolampo nefa hita ny asany sy ny vokatrizany. Tiany ny miompy akoho mainty na osy mainty, dia ireo osy na akoho omenny olona mangataka fitahiana aminy na mangataka fifonana aminy. Tianny kokolampo ny vilany vy sy ny arina. Raha mitsitokotoko mitambatra toy ny nirandrana ny volonny zazakely izay tsy nokasihin-drano sady tsy nohetezana dia lazaina fa noradranin-koko.
5. Ireo fitaovana sy fanao hita maso manan-kasina
Ny fanambaràna ny hevitry ny nofy
Misy koa olona inoanny mpiara-belona fa mahay manambara ny hevitry ny nofy. Matetika dia ny ombiasa no misahana izany asa fanambaràna ny hevitry ny nofy izany.
5.1. Ireo fitaovana sy fanao hita maso manan-kasina Ny sampy
Ny sampy dia tapa-javatra natambatra azo tsapain-tanana izay inoana fa mananan-kasina izay mihazona ny fahasalamana sy ny fahavokarana ary ny fandriam-pahalemana. Matetika ny mpanjaka no lazaina fa manana sampy. Ninoana ho miaro ny mpiara-monina manontolo ny sampy. Aminny ankapobeny dia tahirizina aminny toerana manokana ka tsy afindrafindra ny sampy nefa misy ireo izay azonny tompony enti-madehandeha.
5.2. Ireo fitaovana sy fanao hita maso manan-kasina Ny ody
Ny ody dia tapa-kazo na tapa-javatra hafa izay ninoanny Ntaolo fa manankery hitondra ny soa sy hiaro aminny loza. Karazana sampy isam-batanolona ny ody, ka ninoana fa miaro na manome hery ny olona mitondra na miravaka azy. Ny olona avy aminny saranga rehetra dia afaka mitahiry ody. Mety ho tsara ny ody tahaka ireo izay ampiasainny ombiasa mpanasitrana nefa koa mety ho ratsy tahaka izay ampiasainny mpamosavy.
5.3. Ireo fitaovana sy fanao hita maso manan-kasina Ny faditra
Ny faditra dia zavatra ratsy ahodinny sasany aminny tena na momba ny tononandro ka tokony ho sakanana na esorina aminny alananny fanalana faditra. Ny karazam-borona toy ny akoholahy mena, ny akoho mainty tokam-bolo sns na ny ondry mazava loha, na ny singa avy aminny zavamaniry na zavatra hafa toy ny orana, sns dia azo ampiasaina hanalana faditra. Atao ny ala faditra raha toa ka misy zavatra mifanipaka, toy ny vintan ny olona roa tsy mifanentana fa mifanohitra.
5.4. Ireo fitaovana sy fanao hita maso manan-kasina Ny fanandroana
Ny fanandroana dia fandinihana sy fampiharana ny fifandraisanny fotoana ahaterahanny olona iray na ny fotoana isehoanny zavatra iray ampifandraisina aminny toerana sy ny toetranny Volana sy ny kintana ary ny masoandro sy zavatra hafa toy ny zoro sy ny lafin-tany. Ny vintana no singa manan-danja indrindra aminny fanandroana. Tsy ny fotoana ihany no sahaninny fanandroana malagasy fa ny erana sy ny zavaboary hafa koa.
5.5. Ireo fitaovana sy fanao hita maso manan-kasina Ny fanambaràna ny hevitry ny nofy
6. Ny toetra sy toeranny olombelona sy ny zavaboary
Ny hasina dia hery tsy hita maso anananny olombelona sy ny zavaboary hafa izay afaka manova ny fiainanny olombelona manam-pifandraisana aminizay manana azy izany hoe manana hasina. Misy sokajinolona izay heverina fa manan-kasina kokoa noho ny ankamaroanny olombelona, dia ny andriana, ny mpanandro sy ny mpisikidy, ary ny mpitan-kazomanga. Inoanny Ntaolo malagasy fa avy amin i Zanahary sy ny razana ny hasina. Mety ho very na ho lefy ny hasina raha misy ny ota fady mahakasika izany. Misy koa fomba atao mba hampanan-kasina ny zavatra iray, ohatra ny fanasinana ny sikidy.
Inoanny Ntaolo malagasy fa mamaritra ny toetra sy ny hoavinny olona ateraka na ny zavatra atao ny vintana nefa azo ovana izany aminny alalanny fanalana vintana raha ratsy ka atahorana hitera-doza io vintan-dratsy io. Ilazana ny anjara soa na ratsy miankina amin ny tonon andro nahaterahana koa ny vintana.
vondrom - poko na firenena iray ny fivavahan - drazana Fivavahana amin ny razana Animisma Tôtemisma Fivavahan - drazana malagasy Fivavahan - drazana afrikana
Ny fivavahan - drazana afrikana dia fivavahana maro aty Afrika sy any amin ny tany hafa izay nolovan ny Afrikana monina aty atsimon i Sahara tamin ireo
an Andriamanitra na Zanahary koa ny Malagasy mandala ny fivavahan - drazana rehefa misy zavatra ataony. Ny 41 n ny Malagasy dia Kristiana ka ny tena misongadina
ny fivavahan - drazana malagasy Izany no mahatonga ny mpanoratra sasany, izay te haneho ny maha tokana ny andriamanitra nivavahan ny Ntaolo malagasy hihevitra
no mahafehy ny fiteny arabo. Ny fivavahan - drazana malagasy dia ny fivavahana sy ny finoana narahin ny Ntaolo malagasy izay mifototra indrindra amin ny
mandefitra kokoa ity fomba iray ity. Fivavahana amin ny razana Fivavahan - drazana malagasy Razana Andriamanitra finoan - drazana malagasy Fanahin ny vatana
ka manao izay tsy hifantohana firy amin ny maha avy amin ny fivavahan - drazana malagasy ilay fankalazana. Ara - pôlitika kosa izy raha mifamatotra amin
1869 izy rehefa avy niova finoana ho protestanta ka tsy nekeny ny fivavahan - drazana sady nataony fivavaham - panjakana ny protestantisma. Nifanohana ny
mbola be mpanaraka izany hatramin izao, amin ny maha isan ny fivavahan - drazana malagasy azy. Izao avy ny teny ilazana ny fanompoan - tsampy amin ny fitenim - pirenena
azy am - pasana indray. Izany fanao izany dia ataon ny Malagasy mbola mandala ny fivavahan - drazana ka mitazona sy mampitombo ny fifandraisan ny velona
Zanahary koa ny Malagasy mandala ny fivavahan - drazana rehefa misy zavatra ataony. Mihoatra ny 52 n ny mponina no manaraka ny fivavahan - drazana izay fivavahana
Satria noheveriny fa tia vazaha loatra sy tsy niraharaha firy ny fivavahan - drazana ary nanova ny lamim - piarahamonina nifandovan ny mpanjaka nifandimby
Vohilakatra - Rafaniliha, ny Zafirambo ary ny Zaramanampy. Manaraka ny fivavahan - drazana malagasy ny ankabeazan ny Antefasy fa ny 20 kosa dia Kristiana 45
antokon olona samy hafa izay samy milaza ny tenany fa Jiosy malagasy ao koa ireo tantaran - drazana izay tokony ho raisina amim - pandanjalanjana noho izy ireo
kristianisma, ny finoana silamo, ny hindoisma, ny bodisma ary ireo fivavahan - drazana sasany. Ny fivavahana iray dia finoana arahim - panao sady ampiharina
Antankarana dia manaraka ny fivavahana silamo. Mifangaro amin ny fivavahan - drazana malagasy indrindra ny fivavahana amin ny razana ny fomba iainan ny
ny taonjato faha - 20. Vitsy an isa 10 eo no manohy manaraka ny fivavahan - drazana atao amin ny fiteny ôfisialy hoe kaharingan Toy ny Ngajo mpifanolo - bodirindrina
hampipoaka indray ny ady. Ny ankamaroan ny Zafisoro dia manaraka ny fivavahan - drazana animista. Tsy misy fiavahany firy amin ny fomba amam - panaon ny Antefasy
tia filaminana sy tia miasa ny Makoa. Ny vahoaka makoa dia manaraka ny fivavahan - drazany 66 hatramin ny 70 izay mivavaka amin ny razana sy ny
Wikipedia: Fivavahan-drazana malagasy
malagasy, Fivavahan - drazana, Fivavahan - drazana malagasy, fivavahan-drazana malagasy, fomba malagasy. fivavahan-drazana malagasy,
Fivavahan - drazana malagasy Fivavahan - drazana fivavahan-drazana malagasy fomba malagasy. fivavahan-drazana malagasy malagasy
Les actualités à Madagascar du Vendredi 13 Juillet 2012 Mada buzz.
1. INONA MOA NO ATAO HOE FOMBAN DRAZANA? Marobe ireo fombandrazana eo aminny malagasy: fanaonny razana izay arahinny taranaka mifandimby. Terrorisme numérique Le site web de la police piraté par des. Ny 40 isan jatonny mponina eto izao no milaza fa Kristianina, ny 20 isan jatony Silamo, ary ny 40 isan jato manaraka fivavahan drazana. Mamoaka boky sy. RavaojanaharyJeannine ANTHRO MAST 17.pdf. 1 Ny finoanao ny fivavahan drazana sy ny hafanamponao nanompo taminizany and1 11. Taminizay fitsarana natrehani Paoly hatreto dia ity.
Fivavahan drazana pedia Malagasy.
Ny 18 aogositra 1818 no tonga teto Madagasikara i David Jones sy Thomas Bevan, Misionera nirahinny LMS hitory ny filazantsara aminny Malagasy. Avy any. Ranavalona imasonny Tantara LExpress de Madagascar. Filazana hoe malagasy ao aminny fbra2 Sarasara tsy Ambaka miray na ​voafatotry ny fivavahan drazana isika, rehefa mahafantatra fa araka ny. BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES UNIVERSITAIRES D. Ho mivadika aminny fivavahan drazana sady fivavaham panjakana. Ny soratra rehetra mitantara ny nanjakan dRanavalona Reniny dia tsy. NY FOMBAN DRAZANA SY NY FAMADIHANA SAFIF. Fanarosaromana Fanompoan tsampy ilay Taom baovao malagasy Ilay fivavahan drazana no nasolonny olona sasany ny fivavahana. Fahatongavanny Papa eto Madagasikara Hanamafy ny AoRaha. Sorona sy fomba fivavahanny Zanabibiandriakomanjaka ao Soavinandriana Itasy Andram pamaritana sy fivavahan drazana eto Madagasikara à Madagascar une coexistence pacifique ou conflictuelle? cas des Sakalava.
Ny Tena Hevitra Marina Sy Ny Tena Lanja Marin Tranokalani.
TSY takatry ny Jiosy tao Damaskosy hoe nahoana no lasa mpivadi pinoana ilay olona nafana fo taminny fivavahan drazana. Tsy iza izany fa i. Fivavahan drazana malagasy pedia. Mbola ambadimbadika laha ampitoviana amin i Madagascar fa mbola misy ny ranomsina V: Vato misy, araka ny fomban drazana da hoe Mananova vato. Alatsinainy 01 Jolay 2919. – FJKM. Hisy ihany koa, araka ny loharanom baovao, ny fifanakalozany aminireo mpino silamo sy ny avy aminireo mpandala ny fivavahan drazana.
AMPARAFARAVOLA ANOROHORO Mpitondra fivavahanny Fotoananny lanonana sy ny fetin drazana aminizao fotoana izao any. Tia Tanindrazana. Iantsoanay ny vahoaka Malagasy, Iantsoanay ny olom boafidy hifanome Mpandala ny fomban drazana Mahafaly Aza potehina hanaovana.
Notoherina i Saoly Satria Nitory JW.ORG.
Raha tsy mitsimoka eo aminny firenen dreheetra ny voa avy aminny fivavahan sy ny soa toavina netin drazana avy aminny fahalalana. Télécharger la version PDF Madarevues. Ny fivavahan drazana na fivavaham poko dia fivavahana na finoana anny foko na vondrom poko na firenena iray manokana. Avahana aminny fivavahana. Fitsidihana Ani Cameroun Tany sy Mponina JW.ORG. Araka ny fampitam baovao nomenny sekreteranny Sendikanny mpirakidraharaha malagasy SGM, Jaonary Patrick Soloniaina, omaly, dia. Premier portail Internet de Madagascar Moov. Ny fivavahan drazana malagasy na ny finoan drazana malagasy dia ny fivavahana sy ny finoana narahin ny Ntaolo malagasy, izay mifototra indrindra amin ny.